Oramfs, sistemụ arụmọrụ zuru ezu ezoro ezo | Site na Linux
Oramfs, sistemụ arụmọrụ zuru ezu ezoro ezo
Ọchịchịrị | | Na-atụ aro
Fewbọchị ole na ole gara aga ụlọ ọrụ Nche Kudelski (ọkachamara na ịme nyocha nyocha) kpughere mwepụta nke Oramfs faịlụ sistemụ site na ntinye nke teknụzụ ORAM (Random Oblivious the Access Machine), naSte Ezubere usoro ihe eji mepụta faili eji eme ihe na ebe nchekwa data di n’ime ime ọ naghị ekwe ka onye ọ bụla soro usoro a na-ede ma gụọ na ha, n’otu n’otu. Ejikọtara ya na izo ya ezo, teknụzụ na-enye ọkwa kachasị nke nchekwa nzuzo data
Ihe oru ngo a na-akwado usoro FUSE maka Linux na mmejuputa FS oyi akwa, nke na-anaghị ekwe ka ịchọta usoro nke ịgụ na ide arụmọrụ, edere Oramfs koodu na Rust ma nwee ikikere n'okpuru GPLv3.
Nkà na ụzụ ORAM gụnyere imepụta ihe oyi akwa ọzọ na mgbakwunye na izo ya ezo, nke na-anaghị ekwe ka ịchọpụta ụdị ọrụ dị ugbu a mgbe ị na-arụ ọrụ na data. Dịka ọmụmaatụ, n'ihe banyere iji izo ya ezo mgbe ị na-echekwa data na ọrụ ndị ọzọ, ndị nwe ọrụ a enweghị ike ịchọta data n'onwe ha, mana ha nwere ike ikpebi ụdị mgbochi enweta na ihe arụmọrụ a na-arụ. Ma ọ bụRAM na-ezochi ihe gbasara akụkụ nke faịlụ faịlụ a na-enweta na ụdị ọrụ a na-arụ (gụọ ma ọ bụ dee).
Mgbe ị na-atụle ihe nzuzo nke nchekwa nchekwa, izo ya ezo ezughi iji gbochie leakage ụzọ nnweta. N'adịghị ka ọdịnala ọdịnala dịka LUKS ma ọ bụ Bitlocker, atụmatụ ORAM na-egbochi onye na-awakpo ya ịmara ma ọ ga-arụ ọrụ ọgụgụ ma ọ bụ dee ya na akụkụ nke usoro faịlụ a na-enweta. A na-enweta ọkwa nzuzo a site na ịmekwu arịrịọ ohere karịa ka ọ dị mkpa, ịgwakọta ngọngọ ndị mejupụtara ebe nchekwa ahụ, na ide na izochi data azụ na oge ọ bụla, ọbụlagodi mgbe naanị ọrụ a na-agụ. O doro anya na nke a na-abịa na ọnwụ nke arụmọrụ, mana ọ na-enye nchebe ọzọ ma e jiri ya tụnyere azịza ndị ọzọ.
Oramfs na-enye usoro faili faịlụ zuru ụwa ọnụ nke na-eme ka nzukọ nke nchekwa data dị mfe na nchekwa data mpụga ọ bụla. A na-echekwa data ezoro ezo na nhọrọ nyocha nhọrọ. Enwere ike iji ChaCha8, AES-CTR, na AES-GCM algorithms zoro ezo. Uzo uzo ma obu ede uzo bu uzo uzo ORAM. N'ọdịnihu, a na-ezube ntinye nke atụmatụ ndị ọzọ, mana n'ụdị ha dị ugbu a, mmepe ka nọ na ọkwa nke ụdị, nke akwadoghị maka iji usoro mmepụta.
Oram ike ga-eji na ihe ọ bụla faịlụ usoro na adịghị adabere iche iche mpụga nchekwa ụdị: Enwere ike ịmekọrịta faịlụ ndị a na ọrụ ọ bụla nwere ike ịdakwasị dị ka ndekọ mpaghara (SSH, FTP, Google Drive, Amazon S3, Dropbox, Google Cloud Storage, Mail.ru Cloud, Yandex na ọrụ ndị ọzọ nke rclone kwadoro ma ọ bụ nke enwere FUSE modul iji gbagoo). Enweghị nchekwa nchekwa, ma ọ bụrụ na achọrọ ohere karịa, ogo ORAM nwere ike itolite na-agbanwe agbanwe.
Nhazi Oramfs na-akọwapụta akwụkwọ ndekọ abụọ, nke ọha na nke onwe, nke na-arụ ọrụ dị ka ihe nkesa na onye ahịa:
Akwụkwọ ndekọ aha ọha nwere ike ịbụ ndekọ ọ bụla na sistemụ mpaghara mpaghara nke ejikọtara na nchekwa ndị dị na mpụga site na itinye ha site na SSHFS, FTPFS, Rclone, na usoro FUSE ọ bụla ọzọ.
Edebere ndekọ nke Oramfs FUSE na ndekọ aha nke ya iji rụọ ọrụ ozugbo na faịlụ echekwara na ORAM. Akwụkwọ ndekọ aha ọha nwere faịlụ nwere foto ORAM.
Ọrụ ọ bụla na ndekọ aha nzuzo na-emetụta steeti nke faịlụ onyonyo a, mana faịlụ a dị ka igbe ojii na onye na-ekiri ihe na mpụga, mgbanwe ndị a na-enweghị ike ijikọ ya na ọrụ na ndekọ nkeonwe, gụnyere ọrụ ederede ma ọ bụ ọgụgụ, enweghị ike ikpebi .
Finalmente ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya ma ọ bụ nwee ike nwalee faịlụ faịlụ a, ị nwere ike ịlele nkọwa na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Oramfs, sistemụ arụmọrụ zuru ezu ezoro ezo
Google Play agakwaghị anakwere APK site na Ọgọstụ ma ugbu a na-adabere na ngwa na usoro AAB
Aminator, Nebula na Spinnaker: Netflix Mepee Isi - Nkebi nke 2